I-Terrazza Cafe Viejo - I-Airbnb
I-Terrazza Cafe Viejo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMaurizio
Ukuba ukhangela indawo evulekileyo netofotofo ekufutshane nedolophu kunye nolwandle, iTerrazza Cafe Viejo yeyona ndawo ikulungeleyo! Uhamba nje imizuzu eyi-2 ukuya kunxweme lwasePuerto Viejo kunye neevenkile zokutyela neevenkile ezahlukahlukeneyo ezikufutshane!
Wamkelekile kwi-Terrazza Cafe Viejo!
Phakathi ePuerto Viejo, le flethi okanye indlu ekwicomplex intsha yale mihla yeyona ndawo ifanelekileyo yokonwabela le dolophu inomtsalane. Luhambo oluyi-200mts kuphela oluya elunxwemeni, yindawo ekuvumela ukuba ufikelele lula kuhambo kunye nezinto ezenziwayo, njengokuqesha ibhayisekile uze undwendwele ezinye iilwandle ezifana neCocles, iPunta Uva kunye neManzanillo.
4.95 out of 5 stars from 346 reviews
4.95 · Izimvo eziyi-346
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi346
Idolophu yasePuerto Viejo yidolophu yaseCaribbean eneevenkile zokutyela ezininzi, iibhari, iivenkile kunye nento esoloko isenzeka!
Uza kufumana ezinye zeevenkile zekofu eziphambili kunye neevenkile zokutyela ezikufutshane. NgoMgqibelo sinemarike yasekuhlaleni esitratweni, apho unokufumana iziqhamo nemifuno, itshokholethi yasekuhlaleni kunye nezinye iimveliso ezenziwe ekhaya.
Iflethi inendawo yayo yokungena ukuze yonke ibe yeyakho wedwa! Ukuba ungena emva ko-5 wasebusuku ungangena kwivenkile yokutyela kwaye siza kukunika izitshixo kunye nokukhenketha kwale ndawo (ngaphandle koLwesibini kuba ivenkile yokutyela isondele, kwimeko enjalo sinokulungiselela ukushiya isitshixo, ungakhathazeki!) Ukuba uza ngaphambi kwexesha siza kukwazi ukuququzelela intlanganiso yethu ngaphambi kokuba ufike, sithumele nje umyalezo ukuze sazi ukuba uza kufika nini!
Iflethi inendawo yayo yokungena ukuze yonke ibe yeyakho wedwa! Ukuba ungena emva ko-5 wasebusuku ungangena kwivenkile yokutyela kwaye siza kukunika izitshixo kunye nokukhenketha kw…